Nin Ingriis ah oo 10 bilood kadib koomo ka soo toosay oo aan waxba ka ogeyn cudurka Covid-19… – Hagaag.com
Nin Ingriis ah oo 10 bilood kadib koomo ka soo toosay oo aan waxba ka ogeyn cudurka Covid-19…
Posted on 6 Febraayo 2021 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Ka dib markii uu galay koomo dhaawac culus oo madaxa ka soo gaaray awgeed ayaa ninka Ingiriiska ah soo toosay 10 bilood ka dib, isaga oo aan waxba ka ogayn cudurka Corona ee adduunka ku fiday.
19 jirkan ayaa laba jeer ku dhacay cudurka loo yaqaan ‘Coronavirus’ markii uu miyir beelsanaa ama koomaha ahaa, iyadoo sababtu aheyd shil baabuur.
Warbixintan oo ay daabacday majalada Faransiiska ee Sante Magazine ayaa qoraa Joanna Amsilem sheegtay in Joseph Flavel uu ku dhacay gaari kal hore mar uu wadada ka talaabayay. Dhacdadani waxay dhacday dhowr toddobaad ka hor intaan Boqortooyada Midowday ay gelin gebi ahaanba lockdown-ka sababo la xiriira cudurka faafa ee Coronavirus. Markii uu koomada galay Joseph wuxuu soo toosay, isaga oo aan waxba ka ogayn waxa adduunka qabsaday.
Sida laga soo xigtay eedadiis Sally Flavel Smith ayaa u sheegtay wargayska Ingriiska ee “The Guardian”, Joseph “waxba kama oga cudurkan faafa, wacyiga hareerahiisa ka jirana hadda si tartiib ah ayuu u soo fiicnaanaya, laakiin dhab ahaan ma ogin waxa uu ka ogyahay adduunka. Xaqiiqdii, anigu garan maayo. “Halkee ayaan ka bilaabayaa? Sannad ka hor haddii qof ii sheego wixii dhacay kama rumaysan laheyn. Wax fikrad ah kama haysto sida Joseph u aqbali doono dhacdooyinkii aan ku soo wada nooleyn muddadii la soo dhaafay oo dhan.
Qoraagu wuxuu sheegay in qoyska Joseph ay isku dayeen inay u sharaxaan – iyagoo kula xiriiray wicitaano fiidiyoow ah – sababta ay u awoodi kari waayeen inay ku booqdaan isbitaalka ayna u joogi waayeen dhiniciisa, marka loo eego xayiraadaha caafimaad ee lagu soo rogay dalka.
Eedadiis ayaa tidhi: “Markii uu ka soo toosay qolkiisa, wax fikrad ah kama haysan sababta uu halkaa u joogo,”, “Waxaan isku daynay in aan ugu sharaxno qadka taleefanka, una sharaxno in aan runtii doonayno in aan la joogno oo aan qabsano gacmihiisa, laakiin taas ma sameyn karno. Waxaan isku dayeynaa inaan u fududeyno arrinta isaga intii suurtagal ah, “Kama hadalno wax badan cudurrada faafa, mana faahfaahinno, maxaa yeelay taasi si fudud uma muuqato inay wax jira ay la tahay, marka aan la xiriirno isaga fool ka fool, ka dib waxaan isku dayi doonaa inaan u sharaxno waxa ku dhacay isaga.”
Qoraaga ayaa tilmaamay in Joseph laga soo wareejiyay isbitaalka guud ee magaalada Leicester, halkaasoo uu daryeel caafimaad ku qaadanayay loona wareejiyay xarun kale si loola socdo caafimaadkiisa. Oo wuxuu bilaabay inuu dhaqaajiyo addimmadiisa oo uu la falgalo qoyskiisa iyo asxaabtiisa isagoo madaxa ruxaya oo dhoola cadeynaya. Maanta wuxuu awoodaa inuu taabto dhagahiisa, oo uu dhaqaajiyo lugaha iyo madaxa si uu u muujiyo haa ama maya.
Sida ay eedadiisa tiri, “Weli waxaa hor yaala waddo dheer, laakiin tallaabooyinka uu qaaday saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo la yaab leh oo dhiiri gelin leh.”